Arsenal Oo Tixgalineysa Inay Janaayo U Dhaqaaqdo Samuele Ricci
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo Tixgalineysa inay Janaayo u dhaqaaqdo Samuele Ricci
January 9, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ay u dhaqaaqi karto xiddiga khadka dhexe ee kooxda Empoli Samuele Ricci inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga January.
20 jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxdiisa talyaaniga intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22 isaga oo u saftay 20 kulan tartamada oo dhan isaga oo ka qayb qaatay hal gool iyo hal caawin.
Arsenal ayaa la sheegay inay dooneyso inay lasoo saxiixato ciyaaryahan cusub oo khadka dhexe ah bishaan, sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport , Ricci ayaa u soo muuqday bartilmaameed dhab ah kooxda ka dhisan Waqooyiga London.
Ricci, oo ku soo baxay nidaamka dhalinyarada kooxdiisa Talyaaniga, ayaa kasoo muuqday 18 jeer Serie A intii lagu jiray ololihii 2021-22.
Arsenal ayaa sidoo kale la sheegay in ay doonayso saxiixa Dusan Vlahovic bishaan laakiin waxaa laga yaabaa in ay sugaan ilaa suuqa kala iibsiga xagaaga si ay weeraryahanka Fiorentina u keenaan Emirates Stadium.